Blog | PRO-X Software Solution
MPU Card ကို Ecommerce လျှောက်ထား ပုံအဆင့်ဆင့်
အွန်လိုင်းမှတဆင့် ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်လိုပါက လူကြီးမင်း၏ MPU Card သည် Ecommerce လျှောက်ထားတဲ့ Card ဖြစ်ရပါမည်။Ecommerce Account ဖွင့်မယ်မည်ဆိုပါက E-commerce လက်ခံသော MPU အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များတွင်လျှောက်ထားနိုင်သလို Online တွင်လည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။Online မှတဆင့်လျှောက်မည်ဆိုပါက အောက်ပါ Link သို့သွားရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။https://www.mpu-ecommerc...
အောင်မြင်တဲ့အသင်း တစ်သင်းဖြစ်အောင် ထူထောင်ပါ
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့အသင်းတစ်သင်း၊ ဌာနတစ်ခုဆိုတာ အဖွဲ့ဝင်အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးရှိပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင် အဖွဲ့ဝင်အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးရှိပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကို အောင်မြင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ အ...
Visits : 824
Myanmar (formerly Burma) isaSoutheast Asian nation of more than 100 ethnic groups, bordering India, Bangladesh, China, Laos and Thailand. Yangon (formerly Rangoon), the country’s largest city, is home to bustling markets, numerous parks and lakes, and the towering, gilded Shwedagon Pagoda, which contains Buddhist relics and dates to the 6th centu...
Visits : 4261
Productivity တက်အောင်ဘယ်လိုပြုမူ ကျင့်သုံးနေထိုင်သင့်လဲ
Productivity ဆိုတာက Production Efficiency တက်ဖို့ တိုင်းတာတဲ့အရာပါပဲ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအင်ဆိုတဲ့ ထုတ်ကုန်ရဖို့အတွက် စိုက်ရတဲ့အင်အား၊ ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်ဖို့အတွက်ကို အချိန်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ငွေဖြင့်သော်လည်းကောင်း အရင်းအနှီးပြုရတဲ့ Input နဲ့ ထွက်လာတဲ့ Output မျသလားဆိုတာကို Productivity နဲ့ တိုင်းတာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်...
Visits : 1375
တစ်ခါက အလုပ်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်သင်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူ့ကို အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ပြပေးတဲ့သူက ဝါရင့်စက်ပြင်ဆရာကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ကို စကားနည်းနည်းပြော၊ စက်ရုံထဲမှာ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရည်အချင်းတွေကို တိုးတက်အောင် အမြဲလုပ်နေဖို့ သင်ကြားလမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။&nbsp;အချိန် ၁၀ နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ စက်ပြင်ဆရာကြီးက အနားယူသွားပြီး လူငယ်လေ...
Visits : 1059
Visits : 1141
7 - 12 of ( 153 ) records